Shiishad - Wikipedia
Dhalada badeecada ama shiishada oo dhamaystiran.
Shiishad sidoo kale loo yaqaano Badeecad (Af Ingiriis : Waterpipe ama Shisha; Af-Carabi: نارجيلة‎) waa dhalo biyo ku jiraan oo dusha sare buuri iyo dab lagaga shido isla markaana leh gacan tuunbo dheer oo la nuugo. Badeecada qiiqeega ayaa afka laga qaataa taas oo tegta sambabada.
Buuriga shiishadu wuu ka duwan yahay buuriga kale sababtoo ah waxaa lagu dhex daraa midho kala duwan kuwaas oo bedela dhadhanka iyo urta qiiqa badeecada.
Waxaa jira labo nooc oo badeecad ah, shiishada dabka iyo shiishada korontoda.
madaxa sare ee badeecada.
Dunida maanta wadano badan ayaa shiishada laga isticmaalaa waxaana ugu badan dalalka bariga dhexe, sida Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Masar, Yementa, Marooko, Iiraan, Hindiya, Bangaladhesh, Jabuuti, Soomaaliya, Koonfur Afrika iyo wadano badan oo kale. Shiishadu waxay cadaw ku tahay caafimaadka qofka cabaya weliba si xad dhaaf ah bay u dhaawacaysaa caafimaadka qofka cabaya wayna ka saameyn badan tahay sigaarka, waxyaabah ay ka kooban tahay shiishada ayaa ah waxyaabo kala duwan sida rinjiga la mariyo darbiga guriga kaasoo colour looga dhigo shiishada, rinjigaasi wuxuu dhaawac u geystaa xididada dhuunta oo qaaca jiida iyo qanjirada, ugu dambeyntiina wuxuu sababaa qanjiro xanuun iyo qofka oo candhuufta ceshan waaye.
Waxyaabah kale ee aan aadka uga naxay markii aan dawaday video ka hadlaya dhibaatooyinka shiishada waxaa ka mid ahaa in tubada dheer ee qaaca soo jiida ay dhexdeeda ku jiraan jeermis aad u fara badan kaasoo aan marnaba laga nadiifinin, jeermiskaas wuxuu ka dhashaa dadka kala duwan ee dhuuqay tubadaas. (video ka hadlaya baaritaanka tubadaas waan soo bandhigi doonaa insha allah).
Waxyaabaha kale ee dhaawaca caafimaadka qofka shiishada caba waxaa ka mid ah aluminiumka yar ee dabka dusha laga saaro kaasoo markii uu gubto sii deynayo hawada lagu magacaabo carbon 2 oxide taasina maahan hawo loogu tala galay in la dhuuqo ee waa hawada bani aadanka sii daayo marka uu neefsado , bani aadamkana waxaa loogu tala galay inuu jiido oxygen sida caadiga ah.
Ugu dambeyntii waxaa jira dhallinyaro badan oo u haysata in shiishadu xalaal tahay maadaama carabta inteeda badani ay cabaan, hadaba waad qaldan tahay hadii aad carabta u haysato inay diinta kaaga aqoon badan yihiin, wax kasta oo ay carab sameeyaane xalaal maahan.
Diinta islaamka waxay u soo degtay carab iyo cajam, qofkii illah wadada toosan tusiya ayaana toosnaada, wax kasta oo xalaal ah waa cad yihiin wax kasta oo xaaraan ahna waa cad yihiin.
Shiishada oo la cabo waxay waxyeello u geysan kartaa caafimaadkaaga marka loo eego sigaarka. Sigaar cabka wuxuu muujiyaa ixtiraamdarrada nolosha loo qabo. Qaar ka mid ah bulshooyinka diinta (sida Markhaatiyaasha Yehowah) waxaa saaran waajibaad ah inay si cad uga fogaadaan cabista sigaarka iyo isticmaalka tubaakada..
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shiishad&oldid=218440"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Oktoobar 2021, marka ee eheed 21:54.